အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်သင့်/မသင့်? - For her Myanmar
အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်သင့်/မသင့်?
ဘရန်းခိုင်ပြီး ဈေးကြီးတိုင်း မျက်စိစုံမှိတ်ဝယ်ပစ်ရမှာလား?
ဈေးကြီးကြတယ်နော်၊ အလှကုန်လေးတွေကလေ အင်း။ ဒေါ်လာဈေး၊ ယွမ်ဈေး၊ ဝမ်ဈေး၊ ဘတ်ဈေး စတာတွေကလည်း မြန်မာ့ငွေကြေးနဲ့ ပြောင်းပြန်အချိုးကျပြီး တရိပ်ရိပ်တက်နေတာဆိုတော့ ပိုဆိုးရော။ အဲ့တော့ အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုရင် မကုန်ပါစေနဲ့၊ ငါ့မျက်နှာလေးမှာလည်း ရှိရှိသမျှ သမ္မာဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေ မ,စလို့ Breakout တွေ မထွက်လာပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းလိုက်ရတာ။ ဒါပေမဲ့လည်း ရေမြေအနေအထားအရရော၊ ကိုယ့်စားသောက်တဲ့ ပုံစံအရရောပေါင်းပြီး Breakout က တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန် ဖြစ်ကို ဖြစ်လိုက်ရမှဆိုတော့ကာ… အဲဒီမှာ အနာနဲ့ဆေးတည့်ဖို့အတွက် ပစ္စည်းရှာသုံးတဲ့အချိန် တချို့ပစ္စည်းလေးတွေက ကိုယ့်လစာ၊ မုန့်ဖိုးစတာတွေရဲ့ တစ်ဝက် (သို့) ၄ ပုံ ၃ ပုံ (သို့) ကိုယ့်တစ်လစာ လောက်ဖြစ်နေတတ်တော့ ဝယ်သင့်မဝယ်သင့် ဆုံးဖြတ်ရခက်နေရင် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါလို့။
ကဲ ဟုတ်ပြီ။ ဘာကြောင့်ဈေးကြီးတာလဲဆိုတာကို အရင်သွားမယ်။ နှင်းကိုယ်တိုင် အလှကုန်ပစ္စည်းလောကထဲမှာ ကျင်လည်နေသူမို့ တချို့ဂျင်းတွေကို နှင်းသိသလို၊ တချို့ပစ္စည်းတွေကျတော့ ဘာလို့ဈေးကြီးတာလဲ ဆိုတာမျိုးလည်း သတိထားမိပါတယ်။
ဥပမာတစ်ခုပြောရရင် နှင်းတို့နဲ့ နည်းနည်းအလှမ်းဝေးတဲ့ ဒါးမတ်စ်နှင်းဆီပန်းဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီနှင်းဆီပန်းက တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါပဲပွင့်တယ်။ ပွင့်တဲ့အချိန်မှာပဲ ချက်ချင်းခူးပြီး ၃ နာရီအတွင်း ပေါင်းခံရည်ထုတ်၊ အဲဒီပေါင်းခံရေကို သက်ဆိုင်ရာ အလှကုန်ပစ္စည်းထဲမှာ တစ်ခါတည်းထည့်သုံးမှ ဒီပစ္စည်းက အာနိသင်ရှိမယ်။ ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးကျတော့ တခြားဘယ်ပစ္စည်းထဲမှာမှလည်း အစားရှာလို့မရ၊ တကယ်လည်း အားထုတ်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာ အဆင့်ဆင့်များတဲ့အပြင် တစ်ခါဆိုတစ်ခါ အရမ်းထိရောက်တာမို့ ငွေကြေးအရ တခြားပစ္စည်းထက်များနေတာမျိုးဆိုတာမျိုးကျ သုံးပျော်တယ်လေ။
နောက်ပြီး ကန္တာရထဲမှာ ပွင့်တဲ့ပန်း၊ အပင် စတာတွေကလည်း ခက်ခဲတဲ့နေရာကနေ မနည်းအသက်ရှင်အောင် ရုန်းကန်ရတဲ့ အမျိုးအစားတွေမို့ သူတို့တွေဆီကရတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေဆိုရင်လည်း တကယ့်ကိုရှားပါးပြီး တန်ဖိုးရှိတာမျိုးတွေပါ။ ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရလည်း ဘယ်လိုနေနေတန်နေတာပဲ။
တချို့ပစ္စည်းတွေ ကျပြန်တော့လည်း ထုတ်ထားတဲ့ အရည်အသွေး၊ သုံးထားတဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၊ ယုစွအဆုံး ပါကင်ဒီဇိုင်းကအစ ဘာမှကွဲပြားမှုမရှိ၊ ထူးခြားနေတာမျိုးမရှိဘဲ အတင်းကာရော ဈေးနှုန်းကိုစွတ်တင်တာမျိုးပေါ့လေ။ ကုန်ပစ္စည်းခ၊ ကြော်ငြာခနဲ့ တခြားဘာစရိတ် ညာစရိတ်တွေ ထည့်ထွက်ဦးတောင် ရလာတဲ့ အရည်အသွေးက ကိုယ်ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ မတန်ဘူးဆို ပေးလိုက်ရတဲ့ နင့်ခနဲပိုက်ဆံက အရမ်းကို နှမြောစရာနော်..
အဲဒီလိုဘာမှလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဈေးနှုန်းကများနေတယ် ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်ကကြိတ်မှိတ်ပြီး သုံးနေရတယ်ဆိုရင် သူ့မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီး တခြားဈေးနည်းနည်းသက်သာတဲ့အထဲက ရှာဝယ်သုံးကြည့်ပါ။ (ဥပမာ ကိုယ်က အမိုင်နိုအက်စစ်ပါတဲ့ ပစ္စည်းသုံးမိပြီး တည့်သွားတာမျိုးဆိုရင် တခြားဈေးကွက်ထဲမှာ အမိုင်နိုအက်စစ်ပါပြီး ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကို သေချာရှာပြီး သုံးကြည့်တာမျိုးပေါ့။) တချို့လူတွေများ ဘယ်လောက်တောင် ယုတ်မာလဲဆိုရင် စတီးရွိုက်လိုမျိုး မြန်မြန်အာနိသင်ပြပြီး အသားအရေအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ့် ပစ္စည်းမျိုးတွေကို ဈေးကြီးကြီးနဲ့ကို ရောင်းတာတော်။ (တစ်ခါနဲ့ အချီကြီးစားကြတာပေါ့။)
Related Article >>> အဆီပြန်တဲ့အသားအရေ (Oily skin) အတွက် skincare tips and tricks ပေါင်းချုပ်
အဲ့တော့ နိဂျုံးခုပ် (အဲလေ) နိဂုံးချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ပစ္စည်းမဆို ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့တည့်မတည့်သိပြီးတာနဲ့ ဒီဈေးကတန်မတန်ဆိုတာကိုလည်း ထည့်တွက်ပါ။ ကိုယ်နဲ့တည့်တယ်ဆိုတိုင်း တာဝတိံသာလောက် ဈေးရောက်နေတာကြီးကိုလည်း အစာငတ်ခံပြီး ဇွတ်မဝယ်ပါနဲ့နော်။ သူနဲ့အလားတူ၊ အာနိသင်ကို တူတူနီးပါးပေးနိုင်ပြီး ကိုယ့်အတွက်လည်း စိတ်ချရ၊ ကိုယ်လည်း ယုံကြည်၊ ဘရန်းနာမည်တစ်ခုလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာရှိထားတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးကို ရှာဝယ်ပါ။
နောက်ပြီး တချို့ဘလော့ဂါတွေထဲမှာ တကယ် Honest review ကိုအားမနာတမ်း ပေးတဲ့လူမျိုးရှိတယ်။ (စီးပွားရေးသက်သက်မဟုတ်ဘဲ သူ့ဖော်လိုဝါတွေကို စေတနာထားတဲ့လူမျိုးပေါ့။) အဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့ ရီဗျူးတွေကို သေချာရှာဖတ်ပါ၊ ရှာကြည့်ပါ။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဘရန်းအကြီးတွေကို အရည်အသွေးပိုင်းယှဉ်နိုင်တဲ့ Dupe brand လေးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေကိုလည်း ရှာကြည့်ကြည့်ပါလို့။
ဒါကြောင့် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်သင့်လား၊ မဝယ်သင့်ဘူးလားဆိုရင်တော့ သူတို့သုံးတဲ့ကုန်ကြမ်းရယ်၊ အရည်အသွေးရယ်၊ အမျိုးအစားရယ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဈေးဟုတ်မဟုတ်အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။
အားလုံးပဲ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ ပစ္စည်းကို သေချာရွေးဝယ်နိုင်ကြပါစေနော်။
ဘရနျးခိုငျပွီး ဈေးကွီးတိုငျး မကျြစိစုံမှိတျဝယျပဈရမှာလား?
ဈေးကွီးကွတယျနျော၊ အလှကုနျလေးတှကေလေ အငျး။ ဒျေါလာဈေး၊ ယှမျဈေး၊ ဝမျဈေး၊ ဘတျဈေး စတာတှကေလညျး မွနျမာ့ငှကွေေးနဲ့ ပွောငျးပွနျအခြိုးကပြွီး တရိပျရိပျတကျနတောဆိုတော့ ပိုဆိုးရော။ အဲ့တော့ အလှကုနျပစ်စညျးဆိုရငျ မကုနျပါစနေဲ့၊ ငါ့မကျြနှာလေးမှာလညျး ရှိရှိသမြှ သမ်မာဒဝေနတျကောငျးနတျမွတျတှေ မ,စလို့ Breakout တှေ မထှကျလာပါစနေဲ့လို့ ဆုတောငျးလိုကျရတာ။ ဒါပမေဲ့လညျး ရမွေအေနအေထားအရရော၊ ကိုယျ့စားသောကျတဲ့ ပုံစံအရရောပေါငျးပွီး Breakout က တဈခြိနျမဟုတျ တဈခြိနျ ဖွဈကို ဖွဈလိုကျရမှဆိုတော့ကာ… အဲဒီမှာ အနာနဲ့ဆေးတညျ့ဖို့အတှကျ ပစ်စညျးရှာသုံးတဲ့အခြိနျ တခြို့ပစ်စညျးလေးတှကေ ကိုယျ့လစာ၊ မုနျ့ဖိုးစတာတှရေဲ့ တဈဝကျ (သို့) ၄ ပုံ ၃ ပုံ (သို့) ကိုယျ့တဈလစာ လောကျဖွဈနတေတျတော့ ဝယျသငျ့မဝယျသငျ့ ဆုံးဖွတျရခကျနရေငျ ဒီဆောငျးပါးလေးကို ဖတျကွညျ့ပါလို့။
ကဲ ဟုတျပွီ။ ဘာကွောငျ့ဈေးကွီးတာလဲဆိုတာကို အရငျသှားမယျ။ နှငျးကိုယျတိုငျ အလှကုနျပစ်စညျးလောကထဲမှာ ကငျြလညျနသေူမို့ တခြို့ဂငျြးတှကေို နှငျးသိသလို၊ တခြို့ပစ်စညျးတှကေတြော့ ဘာလို့ဈေးကွီးတာလဲ ဆိုတာမြိုးလညျး သတိထားမိပါတယျ။
ဥပမာတဈခုပွောရရငျ နှငျးတို့နဲ့ နညျးနညျးအလှမျးဝေးတဲ့ ဒါးမတျဈနှငျးဆီပနျးဆိုတာ ရှိတယျ။ အဲဒီနှငျးဆီပနျးက တဈနှဈမှာ တဈခါပဲပှငျ့တယျ။ ပှငျ့တဲ့အခြိနျမှာပဲ ခကျြခငျြးခူးပွီး ၃ နာရီအတှငျး ပေါငျးခံရညျထုတျ၊ အဲဒီပေါငျးခံရကေို သကျဆိုငျရာ အလှကုနျပစ်စညျးထဲမှာ တဈခါတညျးထညျ့သုံးမှ ဒီပစ်စညျးက အာနိသငျရှိမယျ။ ဒီလိုပစ်စညျးမြိုးကတြော့ တခွားဘယျပစ်စညျးထဲမှာမှလညျး အစားရှာလို့မရ၊ တကယျလညျး အားထုတျရတဲ့အပိုငျးတှမှော အဆငျ့ဆငျ့မြားတဲ့အပွငျ တဈခါဆိုတဈခါ အရမျးထိရောကျတာမို့ ငှကွေေးအရ တခွားပစ်စညျးထကျမြားနတောမြိုးဆိုတာမြိုးကြ သုံးပြျောတယျလေ။
နောကျပွီး ကန်တာရထဲမှာ ပှငျ့တဲ့ပနျး၊ အပငျ စတာတှကေလညျး ခကျခဲတဲ့နရောကနေ မနညျးအသကျရှငျအောငျ ရုနျးကနျရတဲ့ အမြိုးအစားတှမေို့ သူတို့တှဆေီကရတဲ့ ကုနျကွမျးတှဆေိုရငျလညျး တကယျ့ကိုရှားပါးပွီး တနျဖိုးရှိတာမြိုးတှပေါ။ ဒီလိုမြိုးဆိုရငျတော့ ဈေးကွီးပေးဝယျရလညျး ဘယျလိုနနေတေနျနတောပဲ။
တခြို့ပစ်စညျးတှေ ကပြွနျတော့လညျး ထုတျထားတဲ့ အရညျအသှေး၊ သုံးထားတဲ့ကုနျကွမျးပစ်စညျး၊ ယုစှအဆုံး ပါကငျဒီဇိုငျးကအစ ဘာမှကှဲပွားမှုမရှိ၊ ထူးခွားနတောမြိုးမရှိဘဲ အတငျးကာရော ဈေးနှုနျးကိုစှတျတငျတာမြိုးပေါ့လေ။ ကုနျပစ်စညျးခ၊ ကွျောငွာခနဲ့ တခွားဘာစရိတျ ညာစရိတျတှေ ထညျ့ထှကျဦးတောငျ ရလာတဲ့ အရညျအသှေးက ကိုယျပေးရတဲ့ဈေးနှုနျးနဲ့ မတနျဘူးဆို ပေးလိုကျရတဲ့ နငျ့ခနဲပိုကျဆံက အရမျးကို နှမွောစရာနျော..
အဲဒီလိုဘာမှလညျးမဟုတျဘဲနဲ့ ဈေးနှုနျးကမြားနတေယျ ဒါပမေဲ့လညျး ကိုယျကကွိတျမှိတျပွီး သုံးနရေတယျဆိုရငျ သူ့မှာပါတဲ့ပစ်စညျးတှကေိုကွညျ့ပွီး တခွားဈေးနညျးနညျးသကျသာတဲ့အထဲက ရှာဝယျသုံးကွညျ့ပါ။ (ဥပမာ ကိုယျက အမိုငျနိုအကျစဈပါတဲ့ ပစ်စညျးသုံးမိပွီး တညျ့သှားတာမြိုးဆိုရငျ တခွားဈေးကှကျထဲမှာ အမိုငျနိုအကျစဈပါပွီး ကိုယျ့အသားအရနေဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ပစ်စညျးတဈခုကို သခြောရှာပွီး သုံးကွညျ့တာမြိုးပေါ့။) တခြို့လူတှမြေား ဘယျလောကျတောငျ ယုတျမာလဲဆိုရငျ စတီးရှိုကျလိုမြိုး မွနျမွနျအာနိသငျပွပွီး အသားအရအေတှကျ အန်တရာယျဖွဈစမေယျ့ ပစ်စညျးမြိုးတှကေို ဈေးကွီးကွီးနဲ့ကို ရောငျးတာတျော။ (တဈခါနဲ့ အခြီကွီးစားကွတာပေါ့။)
Related Article >>> အဆီပွနျတဲ့အသားအရေ (Oily skin) အတှကျ skincare tips and tricks ပေါငျးခြုပျ
အဲ့တော့ နိဂြုံးခုပျ (အဲလေ) နိဂုံးခြုပျရမယျဆိုရငျတော့ ဘယျပစ်စညျးမဆို ဝယျတော့မယျဆိုရငျ ကိုယျနဲ့တညျ့မတညျ့သိပွီးတာနဲ့ ဒီဈေးကတနျမတနျဆိုတာကိုလညျး ထညျ့တှကျပါ။ ကိုယျနဲ့တညျ့တယျဆိုတိုငျး တာဝတိံသာလောကျ ဈေးရောကျနတောကွီးကိုလညျး အစာငတျခံပွီး ဇှတျမဝယျပါနဲ့နျော။ သူနဲ့အလားတူ၊ အာနိသငျကို တူတူနီးပါးပေးနိုငျပွီး ကိုယျ့အတှကျလညျး စိတျခရြ၊ ကိုယျလညျး ယုံကွညျ၊ ဘရနျးနာမညျတဈခုလညျး ခိုငျခိုငျမာမာရှိထားတဲ့ ပစ်စညျးမြိုးကို ရှာဝယျပါ။
နောကျပွီး တခြို့ဘလော့ဂါတှထေဲမှာ တကယျ Honest review ကိုအားမနာတမျး ပေးတဲ့လူမြိုးရှိတယျ။ (စီးပှားရေးသကျသကျမဟုတျဘဲ သူ့ဖျောလိုဝါတှကေို စတေနာထားတဲ့လူမြိုးပေါ့။) အဲ့လိုလူမြိုးတှရေဲ့ ရီဗြူးတှကေို သခြောရှာဖတျပါ၊ ရှာကွညျ့ပါ။ နောကျပွီး နိုငျငံတကာမှာလညျး ဘရနျးအကွီးတှကေို အရညျအသှေးပိုငျးယှဉျနိုငျတဲ့ Dupe brand လေးတှရှေိပါတယျ။ အဲဒါလေးတှကေိုလညျး ရှာကွညျ့ကွညျ့ပါလို့။
ဒါကွောငျ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေို ဈေးကွီးပေးပွီး ဝယျသငျ့လား၊ မဝယျသငျ့ဘူးလားဆိုရငျတော့ သူတို့သုံးတဲ့ကုနျကွမျးရယျ၊ အရညျအသှေးရယျ၊ အမြိုးအစားရယျအပျေါမှာမူတညျပွီး ကိုယျတတျနိုငျတဲ့ဈေးဟုတျမဟုတျအပျေါမှာလညျး မူတညျပါသေးတယျလို့ပဲ ပွောခငျြပါတယျရှငျ။
အားလုံးပဲ ကိုယျနဲ့သငျ့တျောတဲ့ ပစ်စညျးကို သခြောရှေးဝယျနိုငျကွပါစနေျော။
Tags: Beauty, cheap, cosmetics, expensive, industry, Products, vs
Hnin Ei Oo May 31, 2019